VIDEO: Xasan Sheekh Maxamuud,”Farmaajo waa sidii nin naag ay kala tageen ilmo u dhalayso weli”.
September 16, 2020 Xuseen 3
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka, isagoo si gaara isu dul taagay khaladaadka dhinaca sharciga ah ee dhacayay mudooyinkii la soo dhaafay.
Xasan Sheekh Maxamuud oo xubin ka ah siyaasiyiinta u loolamaya doorashada madaxtinimada ee 2021 ayaa eedaymo kulul u jeediyey madaxweyne Farmaajo iyo xubnaha ku gadaaman.
Qaabka hadda ay Villa Somalia shaqada u waddo ayuu ku tilmaamay inay tahay kali talisnimo, isagoo tusaale u soo qaatay ra’iisul wasaare la’aanta dalka ka jirta mudo 53 maalin ah, iyadoo aan xitaa muuqan ifafaalo muujinaya iney socoto soo magacaabisteeda.
“Madaxweynuhu waxa uu sameynayo dastuurka sax kuma ahan, waxba kama duwana Madaxweynaha waxa uu sameynayo nin gabar ay kala tageen weli ilmo u dhaleyso, xaaskii ay kala tageen oo furay asoo weli xaas ay u tahay oo kale waaye, Xukuumadda maanta jirtana waa saas, sharci maaha waa sharci darro”ayuu yidhi Xasan Sheekh.
Alla xikmad yaraa dad aan ogahay!
Maxaa meesha qof DUMAR ah keenay?! Siyaasiyiinta Keenyaatiga ayaaba dhaama, saa marka ay maah-maahayaan ama wax soo xiganayaan, waxa ay mar la arkaba soo xigtaan ama hal hasy ka dhigtaan DOORADA/DIGAAGADDA. Hadda, ninkan weyn ee MADAXWEYNAHA soo maray iyo kuwa la taaganba waxa ay ku hadlayaan bal ila dhuuxa. Kuwaas baa la oranayaa isku Soomaali baad tihiin, waar meesha nagu kala kaxeeya inta iftiinka ka ah. SSC aniga ayaa iska leh. Wbt
Mudane xasan waa runtiis, farmaajo dastuurkii dalka ayuu kufsaday kkkkkk sidii uu harayba caadsda ugu ahayd inuu kufsado gabdhaha soomaaliyed ee sharafta leh farmaajo waa shaqsi xun oo wax walbo ay ka suuroobaan laakiin maanta godkiisii ayaa biyo ugu soogaleen meel uu ka baxo ma jirto waa hareersysanyahay xabsi ayuu gali doonaa insha allaahu. Loomana cafinayo dambiyaduu ka galay shacabka soomaaliyed
FARMAAJO xaare waxaa ka daran maxamuud salabeen xaare oo meel walba rabaan iney hor boodan waana xukun jecel maanta maxamuud salabeen waxaa lagu hayaa QORI HANGOOL AH……